Ngwa - Shanghai Huitian New Materials Co., Ltd.
Mere àmụmà NO.1 ahịa òkè
Na-arụ ọrụ na ndị ahịa 10 kachasị elu
E nwere 31% òkè ahịa na ụlọ ọrụ Led maka ngwaahịa Huitian. Anyị na-enye potting, bonding, okpomọkụ conduction wdg niile usoro nrapado ngwọta si batrị, àmụmà na ihuenyo.
Ọ ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ fotovoltaic bụ nke mbụ na ụwa
Atọ modul ọ bụla, enwere nke na-eji ngwaahịa Huitian
Huiten bụ onye mbụ kwụụrụ onwe ya na China.
Site na silica gel na efere azụ, site na efere azụ na ihe nkiri fluorine, site na isi akụrụngwa na njikọ, huiten achọpụtala nyocha nke onwe na mmepe na mmepụta, taa aghọwo onye ndu ụwa na ihe ngwugwu fotovoltaic.
NO.1 ahịa òkè maka azụmahịa ụgbọala ụlọ ọrụ
E nwere 37% òkè ahịa na ụlọ ọrụ ụgbọ ala azụmahịa maka ngwaahịa Huitian. Anyị na JINLONG, YUTONG, JINLV, ZHONGTONG, HAIGE, FUTIAN, na ndị ọrụ iri na ise niile rụchara ọrụ. Huitian enye azụmahịa ụgbọala niile usoro nrapado ngwọta si akara na bonding.
Qualitydị dị elu na-enweta ntụkwasị obi ndị ahịa n'ụwa niile
Nowa No.1 cross sea akwa
HK- Macau - Zhuhai gafere akwa mmiri
Nowa No.1 nkwukọrịta ngwá emeputa
NOwa NO.1 elu ọgwụgwụ smart ekwentị emeputa
Smart ọgwụgwụ ngwaọrụ ngwa ngwa ụgwọ miri hazie nrapado ngwọta.
Ndi igwe ihe eji eme uzo ugbo ala nke mba 1
Huitian nwere ogologo oge usoro mmekorita nkwekọrịta na ọsọ ụgbọ okporo ígwè ajụjụ nrapado na okporo ígwè wdg nwere mkpokọta imekọ ihe ọnụ.
Nowa No.1 azụmahịa ụgbọala emeputa
Onye na-emepụta ọkụ ọkụ 1 nke ụwa
Huitian ugbua nwere 15 afọ akụkọ ihe mere eme na electronic nrapado ụlọ ọrụ ， nwetara SGS, Mankeumman wdg asambodo mba. Kụziri site na elu mma na ọkachamara, elu oru oma na a pụrụ ịdabere na ngwa technology, anyị nwetara niile ahịa obi。
Mba 1 nke PV modul na-emepụta ihe
Jinko bu ulo uku PV modul soplaya nke nwere 14% uzo ahia nke uwa na ikike 11.5 GW na 2018.